Xiliga uu furmayo Kalfadhiga 7-aad iyo wakhtiga ay Baarlamaanka hor-imaanayaan Guddiga Doorashooyinka oo la shaaciyay – Kalfadhi
Xiliga uu furmayo Kalfadhiga 7-aad iyo wakhtiga ay Baarlamaanka hor-imaanayaan Guddiga Doorashooyinka oo la shaaciyay
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta shaaciyay in 6-dda bisha June uu furmi doono Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka, kaddib shir ay ku yesheen xarunta Villa Hargeysa ee Mogadishu.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa maanta si wada-jir ah u guddoomiyay shirka.
Guddiga ayaa sidoo kale maanta shaaciyay in 27-ka bisha June loo yeeri doono Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka.
Maxamed Cabdillaahi Xasan oo ah hab-dhawraha golaha shacabka ee Baarlamanka Soomaaliya, ayaa sheegay in qorshaha uu yahay in kulamadda ay qabsoomaan iyadoo la isticmaalayo aalada ZOOM-ka ee internet-ka madaama aysan suura-gelli doonin in lagu kulmo xarumihii lagu shiri jiray.
Baarlamaanka ayaa diyaariyay barnaamij gaar ah oo ilaa 500 oo qof ay hal mar ka qeyb-gelli karaan, waxaana kulamada hadda lagu qaban doono aalada ZOOM-ka ka qeyb-gelli doona shaqaallaha muhiimka ah iyo 275-ta xildhibaan.
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo maanta kulmaya